Football Khabar » सँगै खेल्न नपाई स्वारेज र ग्रीजम्यानबीच ‘खटपट’ !
सँगै खेल्न नपाई स्वारेज र ग्रीजम्यानबीच ‘खटपट’ !
स्पेनिस बार्सिलोनाले हालै अनुबन्ध गरेका फ्रेन्च स्टार एन्टोनी ग्रीजम्यान हाल बार्सिलोनामा खुसीसाथ प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । बार्सिलोनामा निकै उत्साहसाथ पुगेका २७ वर्षीय ग्रीजम्यान नयाँ सिजनमा टोलीको प्रमुख हिस्सा बन्ने पक्का छ ।
तर, ग्रीजम्यानका लागि बार्सिलोनाको ‘ड्रेसिङ रुम’ अपेक्षा गरेजस्तो सहज नहुने संकेत देखिएको छ । उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेज र ग्रीजम्यानबीच सँगै खेल्न नपाईकनै ‘खटपट’ देखिन थालेको चर्चा सुरु भएको छ ।
बिदा मनाएर स्वारेज तीन दिनअघिबाटै बार्सिलोनाको प्रशिक्षण क्याम्पमा सहकर्मीसँगै व्यस्त छन् । ग्रीजम्यान पनि सोही टोलीमा छन् । तर, हालसम्म ग्रीजम्यान र स्वारेजबीच प्रत्यक्ष कुराकानी नभएको स्पेनिस मिडियाले जनाएका छन् ।
यतिसम्म कि, पछिल्ला दुई दिनका प्रशिक्षणक्रममा ग्रीजम्यान र स्वारेज दुवै सहभागी भए पनि प्रशिक्षणभरि दुई खेलाडी एकअर्कासँग बोलेनन्, एकले अर्कोलाई सिधा नजरले सम्म हरेरेनन् । उनीहरू प्रशिक्षणमा सँगै त छन् । तर, अलग–अलग भएजस्तो गरेर प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
बार्सिलोनाले हालसम्म सार्वजनिक गरेका प्रशिक्षणका भिडियो फुटेज तथा तस्बिरहरूमा पनि ग्रीजम्यान र स्वारेज एकसाथ देखिएका छैनन् । भिडियो र तस्बिर दुवैमा उनीहरू फरक–फरक अवस्थामा छन् ।
स्पेनिस मिडियाले आगामी दिन बार्सिलोनाको ड्रेसिङ रुममा समस्या हुने स्पष्टै देखिएको भन्दै खबर छापेका छन् । ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’ ले ‘ग्रीजम्यान र स्वारेज मित्रवत् देखिएनन्’ भन्दै खबर छापेको छ । ‘एएस’ ले पनि ग्रीजम्यान र स्वारेज प्रक्षिण क्याम्पमा घुलमिल नभएको र कुराकानी नगरेको विषयलाई खबर बनाएको छ ।
अघिल्लो दिन ग्रीजम्यानले भने एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै स्वारेज बिदामा रहेकै बेला उनले आफूलाई सन्देश पठाएर बार्सिलोना अनुबन्धका लागि बधाई दिँदै टिममा स्वागत गरेको तर मेस्सीले भने हालसम्म सम्पर्क नगरेको बताएका थिए ।
तर, प्रशिक्षण क्याम्पका तस्बिर र भिडियोहरू हेर्दा स्वारेज र ग्रीजम्यानबीच सम्बन्ध राम्रो बन्न नसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।
यो बताइन्छ कि, ग्रीजम्यानको अनुबन्धपछि बार्सिलोनामा स्वारेजको भविष्य सुरक्षित छैन । हाल ३२ वर्ष पुगेका स्वारेजको समय ग्रीजम्यानले कटौती गर्ने सम्भावना छ ।
यसअघि ग्रीजम्यान बािर्सलोना सर्ने चर्चा चलिरहेका बेला पनि स्वारेज र कप्तान लिओनल मेस्सी ग्रीजम्यान ल्याउने पक्षमा थिएनन् । ग्रीजम्यान आएपछि टोलीमा स्वारेजको भविष्य संकटमा पर्ने भएकाले मेस्सी पनि ग्रीजम्यानको पक्षमा नरहेको चर्चा थियो । मेस्सी र स्वारेज बार्सिलोनामा घनिष्ठ मित्र हुन् । उनीहरूको परिवारबीच पनि उत्तिकै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ ।
र, मेस्सी बार्सिलोनामा स्वारेजको भविष्य संकटमा परेको देख्न चाहँदैनन् । यसअघि बार्सिलोनाले स्वारेज बेच्ने तयारी गर्दा पनि मेस्सीले नै रोक्न भूमिका खेलेको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १५:४०